Ma dhabbaa in shirkadda Al-bayrak ay hab musuq-maasuq ah ku siisay W/Maaliyadda lacag ka badan $ 800.000.? | YoobsanNews.com
Ma dhabbaa in shirkadda Al-bayrak ay hab musuq-maasuq ah ku siisay W/Maaliyadda lacag ka badan $ 800.000.?
Waxaa sii kordhaya qeyla-dhaanta ka soo yeereysa Ganacsatada badeecooyinka kala soo daga Dekadda Muqdisho, kaddib markii Shirkadda Al bayrak ee maamusha Dekadda Muqdisho ay kordhisay qidmadaha canshuurta ah ee laga qaado badeecooyinka kala duwan ee ka soo dega Dekadda Muqdisho, ayna gaarsiisay qiimaha canshuurta 60%.
Ganacsade Maxamed Jimcaale oo ka warbixinayey xaaladda adag ee haysata Ganacsatada ayaa sheegay in heshiis suuq madow ah oo lagu xalaaleysanayo dhiddidka Ganacsatada ay wada gaareen Maamulka Shirkadda Al-beyrak & Wasiirka Maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti, wuxuuna tilmaamay in nuxurka heshiisku yahay in wasiirku ayido qiima kordhiska ay sameysay shirkadda Turkishka ah, taas bedelkeedana la siiyo lacag dhan $ 800.000 (sideed boqol kun dollar).
Shirkadda Al-beyrak ayaa qandaraas lagu siiyey inay maamusho Dekadda muddo ka badan 30 sanno, waxaanna la shaqeeyo shirkadda APK Party oo Madaxweynuhu ka mid yahay dadka saamiga ku leh, waxaanna markii shirkadda Al-Beyrak ay la wareegtay howsha Dekadda ay ruqseeysay 90% shaqaalihii ka howlgalayey Dekadda.
Ganacsade Maxamed Jimcaale oo ka hadlayey qiima kordhintaasi wuxuu kaloo sheegay in Masuuliyiin ka tirsan Hantidhowrka oo damcay iney baaraan musuq-maasuqa ka jira Dekadda iney la xiriiraan Xogheynta Madaxweynaha si ay Madaxtooyada ugu gudbiyaan cabashadooda hasse ahaatee ay hungo & gacmo marnaan kala kulmeen.
Previous: DANJIRE MUUSE XASSAN “Wasiir kasta ee imaanaya dal ay Dowladiisu safaarad ku leedahay xeerka Diblumaasiyadu waxeey tahay inuu safaaradiisa soo wargeliyo, waxaa socda isku dhex yaac”
Next: Shir sannadeedka Hay’adda Himilo oo lagu qabtay Amsterdam (SAWIRRO)